Bọọlụ EGO ga-enye ndị ụmụ amaala ezumike nka ọrụ n'efu RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraBusgbọ ala ndị EGO ga-enye ụmụ amaala nwere ikike n'efu
22 / 05 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Turkey
busgbọ ala ego ga-enye ụmụ amaala ezighi ezi ọrụ n'efu
Obodo Ankara mepere emepe akwadoro maka Eid al-Fitr. Na mgbakwunye na n'okporo ụzọ na boulevardss nke Başkent, a na-arụ ọrụ nhicha na-eli ozu, ebe ndị otu ndị uwe ojii na-emechi nyocha nri ha karịsịa maka ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-atọ ụtọ. Tebụl Mpụ, Başkent 153, ASKİ, Ankara Fire Brigade na ndị uwe ojii Municipal ga-arụ ọrụ na ntuliaka 7/24 n’oge oriri, gụnyere ụbọchị Arife. Lọ nkwari akụ Halk Ekmek na ebe a na-ere nri Halk Ekmek ga-emeghe naanị n'etiti 23-3 na Mee 26, Satọdee na 10.00 nke Mee. Sayensị na ndị otu ASKİ ga-aga n'ihu na akụrụngwa ha na ọrụ nkwenkwe ụgha. Egbọ njem EGO, nke na-eburu ndị Ankara na-akwụghị ụgwọ n'oge ezumike nke mba na nke okpukpe, ga-efekwa ụmụ amaala a gụpụrụ ịpụ oge.
Obodo Ankara mepere emepe ememme ya niile na obodo ahụ tupu Ememe Ramadan, nke ga-agafe n'okpuru ndò maka mgbochi coronavirus n'afọ a.
Baskent 153, Tektọ Nsogbu, EGO na ASUSI General Directorate, ndị uwe ojii Ankara na Ngalaba Ọkụ Na-ahụ Maka Ọkụ ga-arụ ọrụ 7/24 iji gboo mkpa na ọchịchọ nke ndị bi na Ankara n'oge ezumike ahụ.
EGO NA-EGO KA EGO NA-EGO
EGO General Directorate, nke ga-eweta njem ọha na eze n'etiti oge ụfọdụ na Mee 23, ga-enye ọrụ ụgbọ ala na-akwụghị ụgwọ n'etiti May 24-26, ewezuga usoro ụgbọ okporo ígwè, n'ikwekọ na mkpebi nke vinlọ Ọrụ Ọchịchị Sanitary General of Govanọ nke Ankara:
- Mee 23, 2020: 07.00-20.00
- 24-26 Mee 2020: 07.00-09.00 na 16.30-20.00
N’oge ncheta nke ọnwa Ramadan, ebe mkpebi nke Mgbakọ obodo n’etinyefe njem ụgbọelu n’ememe okpukpe na nke mba, ndị Ankara bụ ndị anaghịpụrụ n’usoro ịpụ ga-enwe ike irite uru na bọs EGO n’efu n’oge awa akọwapụtara.
ỌR TE ỌR IN INM INAKA NKWUKWU EGO
Bawanye nnyocha nri a na-eme kwa mgbe ụmụ amaala na-enweta nri dị mma tupu ezumike ahụ, ndị uwe ojii Ankara; Ọ na-aga n'ihu nyocha ya maka azụmahịa nke na-emepụta ma na-ere ngwaahịa na-eme achịcha na ngwaahịa ụtọ.
A na-eme ihe gbasara iwu maka adịghị ike ndị a hụrụ na audits na-enyocha ma nnabata maka ahụike, ịdị ọcha, efere ụtụ na ọrịa coronavirus, nnabata iji ihe mkpuchi, uwe aka, aka uwe, ọkpụkpụ na uwe elu, ndị na-elekọta mmadụ, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na ndị ahịa na-enyocha.
N’ikwu na Ngalaba ndị uwe ojii Ankara ga-enyocha ma ụlọ ọrụ na azụmaahịa emechiri emechi n’ụbọchị amalitere, Onye isi ndị uwe ojii nke Obodo Metropolitan Mustafa Koç nyere ozi ndị a:
“N'ụbọchị ndị a, mgbe anyị na-akwado isoro ndị mba Ankara anyị gọzie Eid al-Fitr na ọnọdụ iji luso ọrịa a ọgụ, ìgwè anyị, bụ ndị na-agagharị gburugburu elekere, na-aga n'ihu na-achịkwa obodo ahụ dum. N'ime etiti ahụ, anyị nwere ndị otu na-emeghachi omume ozugbo na mkpesa erutela akara Başkent 153. ”
NKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỌ Ị GA-EME
Ngalaba ebe a na-eli ozu akwadebekwara ihicha ebe a na-eli ozu tupu ezumike Ramadan ma kwadebe ha maka nleta ahụ.
Na mgbakwunye na mpaghara niile nke isi obodo KarşıyakaKa a na-arụ nhicha na Ortaköy, Cebeci Asri, Gölbaşı, Bağlum na Sincan Cimşit, a na-elezi anya iji hụ na ọdịdị ihu igwe niile oke ide mmiri ruru tupu ememme ahụ ka ọ ga-etinye, na-ele anya dị ọcha, na-edozi ma na-edozi ya nke ọma.
N'ime ọrụ niile nke osisi ndị dị n'ili na-elekọta, a na-akpachapụ alaka alaka ya na ata ndị ahụ. A na-eme nhicha dị egwu na ebe a na-eli ozu ebe a na-ahapụ ndị ikwu ka ha gaa ụbọchị mbụ nke oriri ahụ.
N’igosipụta na ha bidoro nkwadebe maka oriri a ọnwa 1 gara aga n’ebe a na-eli ozu niile, Onye isi Ngalaba Ọnọdụ Ọnọdụ Köksal Bozan kwuru, sị:
“N'ikwekọ na ntuziaka nke Mayor anyị Mr. Mansur Yavas, ọ bụghị naanị ebe a na-eli ozu kamakwa ebe a na-edebe ebe ili ozu niile. A sachara ọrụ nhicha na ndozi n’ili nke ebe 6 anyị na etiti. Anyị bidoro tụọ ọkụ n'ọnụ ụzọ mbata nke ụmụ amaala anyị bịara maka nleta ahụ, anyị na-enyekwa ndị ahụ na-enweghị nkpuchi ihu. Ndị ikwu nke ndị nwụrụ n'ihi okwukwe ga-enwe ike ịga nleta shahada ụbọchị mbụ nke ezumike n'usoro kwekọrọ na okirikiri nke Ministrị nke ime. Ebe a na-eli ozu anyị ga-abụ nke nleta nke ụmụ amaala anyị na-enweghị usoro iwu n'oge usoro iwu. ”
Ọkụ ANKARA NA AKW 153KWỌ 7 CRISIS TABLE Ga-enye POST 24/XNUMX
Baskent, nke na-arụ ọrụ dị ka ebe nkwukọrịta n'etiti isi obodo na Obodo Isi Obodo, ga-arụ ọrụ na 153/7 iji mezie ihe ụmụ amaala chọrọ n'oge ntakịrị.
Usoro nke Nsogbu na Usoro Nkwado Ọgụgụ nke guzobere n'oge usoro ọgbụgba na coronavirus ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ maka ihe ụmụ amaala chọrọ n'oge ezumike ahụ. Ndị bi na Ankara ga-enwe ike izipu arịrịọ ha na mkpesa ha na Mgbakọ Metropolitan site na nọmba ekwentị Nsogbu "0312 666 60 00" ma ọ bụ site na Isi obodo 153.
Ngalaba Ọkụ Ankara ga-arụkwa ọrụ 46/7 na ọdụ 24 ọnụ yana mpaghara. Ndị bi na Başkent ga-enwe ike ị nweta mkpesa ọkụ ọkụ ga-enwe site na ebe nlegharị anya 112.
HANGER NA sayensi na-arụ ọrụ n'oge ọrụ
ASKI General Directorate ga-aga n'ihu na-enye ndị isi ọrụ ọrụ, 7/24, n'oge ezumike ahụ.
Maka mkpa dị mkpa, ụmụ amaala ga-enwe ike iru ASKİ site na mpaghara oku mberede "0312 616 10 00" ma ọ bụ site na Isi obodo 153. Ndị otu ASKİ, nke ga-aga n'ihu na-enye ndị ọrụ ekwentị awa iri abụọ na anọ kwa ụbọchị na Kaadị Counter Fail Maịul na Mmezi Mmezi; Azụmaahịa kaadị Card nke ụmụ amaala nwere nkwarụ, ndị ọrụ ahụike na nchekwa, ọkachasị ụmụ amaala karịa 24, ga-aga na adres ha.
ASKI General Directorate ụlọ ọrụ ga-emeghe n'etiti 4-08.00 maka ụbọchị 17.00 maka nnọchi, mmegharị ma na-ebuputa ọrụ kaadi kaadị magnet. Ndị otu ahụ ga-aga n'ihu na mmebi ha, mmezi na akụrụngwa na-enweghị nkwụsị.
Dịka akụkụ nke ọgụ megide coronavirus, Ngalaba Science Science, nke mụbara mgbanwe asphalt na oge ịlọta etinyere na ngwụsị izu, ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ n'ememe ahụ. Ndi otu Ngalaba Sayensị, nke ga-arụ ọrụ nchekwa na ọrụ mmezi n'etiti etiti na mpaghara niile, ga-eweta ụzọ nlegharị anya na nchekwa nchekwa n'okporo ụzọ ndị isi.
CBỌCHLE AYBỌCH THE N’ CBỌR.
Ndị otu City Aesthetics Ngalaba tinyekwara ngwa n'ọrụ nhicha ọcha n'obodo ahụ tupu mmemme oriri Ramadan.
Na mgbakwunye n'okporo ụzọ na boulevards nke Ankara, ndị otu na-arụ ọrụ ịsa ahụ na nkwụsị bọs, oche, n'akụkụ ụzọ, ogige na mgbochi na isi ihe dị ka Ulus na Kızılay kwadebere obodo maka oriri ahụ. Vehiclesgbọ ala na otu egwuregwu ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ na ntanetị 7/24 n'oge oriri nke ngwụcha ga-etinye maka Ankara na-enwu enwu.
FOLKRE BADR IS B ONR L LBỌCHAST NA-EGO NA N’ THEBỌCH.
Actorylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Achịcha Ọha na Obodo, nke ghọrọ akara na isi obodo, ekpebiela usoro ọrụ maka emume Ramadan.
Halk Ekmek, nke na-aga ịhazi ụbọchị ọrụ na awa iji gboo mkpa nri ụmụ amaala ma na-eburu ngwaahịa nke ndị na-emepụta ime ụlọ na shelf ya, gosipụtara baklava na ụdị ihe eji megharịa ọnụ iji kwadoo maka ememme ahụ maka ndị isi ike.
Lọ nkwari akụ Halk Ekmek na ebe a na-ere nri Halk Ekmek ga-emeghe naanị n'etiti 23-3 na Satọde, Mee 26, Mọnde, Mee 10.00, ụbọchị nke atọ nke ezumike.
Followinggbaso mmalite nke njem etiti mgbe emechara ụmụ amaala dị afọ 65 na karịa ka ha nwere ohere ịlaghachi n'ụlọ, emere usoro niile dị mkpa na AŞTİ. Ọ bụ ezie na a naghị akpọ ụmụ amaala nwere ikike njem gaa na AŞTİ na-enweghị nkpuchi, a na-ebukwa usoro nchekwa n'ọkwa dị elu.
15 na Batman All Buses ga-arụ ọrụ na July
Ụgbọghị ụgbọ elu dị na Ukraine amaghị ụtụ na VAT
A ga-etinye ego nlekota okporo ụzọ site na VAT
3. ụgbọ elu na-ekwu na a ga-ahapụ ya na akụkọ EIA
A pụghị ịhapụ Ụlọikpe Gulf Crossing Bridge EIA
Ndi Mechanic apughi ime
A ga-emepụ okporo ụzọ okporo ụzọ site na Iwu Mgbasa Ọha ruo 2023!
Ala akwa nke atọ enweghị ụgwọ si na VAT.
A ga-anapụ ndị na-ahụ maka ọrụ ugbo, anụmanụ na ngalaba nri
Ụgbọ njem na-enyefe ụmụ amaala site na Eletriki eletrik na Eskisehir
Bọọlụ EGO na Ọrụ Ankara zuru ezu